Face Art Aesthetic & Skin Laser Clinic | Beauty MM
Face Art Aesthetic & Sk…
Face Art Aesthetic & Skin Laser Clinic
ရလဒ်အားဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော Treatment များကိုအချိန်တိုအတွင်း နာကျင်မှုကင်းကင်းနှင့် ရနိုင်ဖို့ အတွက် Face Art တွင် ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး Q-Switched လေဆာစက်ဖြစ်သော Spetcra XT စက်ကြီးဖြင့်ကုသမှု ခံယှုနိုင်ပါပြီ။
09 953 330001
No. 89, Phone Gyi Street (Middle Block) Lanmadaw Township.
10.မျက်လုံးအောက်ရှိ အဆီပိုများ ဖယ်ရှားပေးခြင်း
11.Tattoo Removal (တက်တူးဖျက်ပေးခြင်း )
12.One – Stop Soluction for Acne and Eryrthema )၀က်ခြံကုသပေးခြင်း
13.Onychomycosis Treatment ( အရေပြားမှိုစွဲမှုကုသပေးခြင်း)
16.Other Treatment by eCO2
မျက်ဝန်းတစ်စုံသည် မျက်နှာတစ်ခု၏ လှပတင့်တယ်မှုကို အဓိကဖော်ဆောင်ပေးနေသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ လှပသောမျက်ရစ်သည် လှပသောမျက်ဝန်းတစ်စုံကို ဖြစ်စေပါသည်။ မျက်ရစ်မပါခြင်း၊ မျက်ရစ်ပါသော်လည်း မျက်ရစ်သေးနေခြင်း၊ မျက်ရစ်တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် မညီခြင်းနှင့် မျက်ခွံတွဲကျနေခြင်းများကို ပြန်လည်ပြုပြင်ကာလှပသော မျက်ဝန်းပိုင်ရှင်အဖြစ် ၀င့်ကြွားနိုင်ပါပြီ။
မျက်လုံးအောက်ရှိ ပုံမှန်ထက်စုဝေးနေသော အဆီပိုများသည် ရုပ်ရင့်စေရုံမက ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသည့် ပုံပေါ်စေပါသည်။ မျက်လုံးအောက်ရှိ ထိုအဆီပိုများကို ဖယ်ရှားပြီးငယ်ရွယ်နုပျိုသည့် ရုပ်ရည်မျိုးကို ပြန်လည်ရရှိနိုင်ပါပြီ။
ပြည့်ပြည့်ဖောင်းဖောင်းဖြစ်နေသော ပါးနှစ်ဖက်ရှိ အဆီပိုများကိုဖယ်ထုတ်ပြီး သွယ်လျလှပသော မျက်နှာအနေအထားရရှိအောင် ပြုပြင်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
ချောမောလှပသော မျက်နှာပိုင်ရှင်ဖြစ်ရေးတွင် နှာခေါင်းသည်လည်း အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်း အဖြစ်ပါဝင်နေပါသည်။မိမိမျက်နှာ အနေအထားနှင့် လိုက်ဖက်ကိုက်ညီသော နှာခေါင်းကို အချိန်တိုအတွင်း ပြုပြင်ဖန်တီးယူနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
မေးစေ့အနေအထားသည် မျက်နှာသွယ်လျမှုကို အဓိကအထောက်အကူပြုနေလျက်ရှိသည်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောမေးစေ့ရရှိအောင် ပြုပြင်နိုင်ပါပြီ။
❤️ မျက်နှာတင်းရင်း နုပျိုစေခြင်း
အသက်အရွယ်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ နေထိုင်စားသောက်မှု ပုံစံကြောင့်ဖြစ်စေ၊ တင်းရင်းမှုလှပမှုမရှိတော့ဘဲ တွဲကျနေသောမျက်နှာအသားအရေကို ပြန်လည်တင်းရင်း၊ နုပျိုလာအောင်ပြုပြင်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
❤️ Pigment Removal
နေလောင်ဒဏ်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့်သော်လည်းကောင်း ထွက်ပေါ်လာသော အမဲစက်၊ အမဲကွက်များ၊ နေလောင်ကွက်များ၊ တင်းတိပ်များ၊ မှဲ့ ခြောက်များ စသည်တို့ အတွက် Spectra XT ၏ “Ru VY Touch” နှင့် “Laser Toning” ကိုခံယူကာ ချောမွေ့ လှပသောမျက်နှာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ။
❤️ One – Stop Solution for Acne and Erythema
ရောင်ရမ်းနေသောဝက်ခြံများ နှင့်ထိုဝက်ခြံများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အနီစက်၊ အနီပြင်များကိုလည်း ကုသပျောက် ကင်းနိုင်ပါပြီ။
❤️ Onychomycosis Treatment
လက်သည်း၊ ခြေသည်း မှိုစွဲခြင်းစသော အရေပြား ကိစ္စများအတွက် Onychomycosis Treatment ဟုခေါ်သောကုထုံးကို ခံယူပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။
❤️ Tottoo Removal
ကာလာစုံထိုးသော တက်တူးဖြစ်စေ၊ အချိန်ကာလ ကြာရင့်နေပြီဖြစ်သောတက်တူးဖြစ်စေ၊ Spectra XT ၏Tattoo Removal စနစ်ဖြင့်နာကျင်မှုကင်းစွာ ဖျောက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
Victorious Skin & Aesthetic Cl…
Beauty Box Aesthetic,MediSpa &…